Amaqembu amancane agxila kokunyanyalatwayo - Bayede News
Home » Amaqembu amancane agxila kokunyanyalatwayo
Amaqembu amancane agxila kokunyanyalatwayo
‘Kuqinis’ idolo ukudlal’ e-USA’, kusho umqeqeshi
NGONHLABA wezi- 2017, amalungu ePhalamende likazwelonke ahlangana adingida udaba lokuxhaswa kwemboni yamatekisi. Lena kwakuyinkulumompikiswano yokucebisa uMnyango Wezokuthutha ukuthi uyihlele kanjani imali yawo. USihlalo Wekomidi loMnyango Wezokuthutha ePhalamende uMs Dikeledi Magadzi wazwakalisa ukungenami kwakhe ngokugqoza koxhaso olusuka kuHulumeni uma kuziwa embonini yamatekisi.
Kule nkulumo wabeka wathi; “Akulungile ukuthi isikhwama semali kaHulumeni sivuleke kuphela uma kukhulunywa ngeGautrain, izitimela kanye namabhasi kodwa uma sekuziwa embonini yamatekisi okuyiyo ethutha okwedlula zonke lezi zimboni avele ebheke eceleni”.
Oyilungu le-Economic Freedom Fighters ePhalamende uThilivhali Muluadzi wakhumbuza ukuthi baphakathi kwama-20% nama-30% kuphela abantu abanezimoto eNingizimu Afrika, okusho ukuthi abangama-80% basebenzisa izithuthi zomphakathi okungamatekisi agcakagcayo, okungakho le mboni kufanele ibe seqhulwini uma kukhulunywa ngoxhasomali oluvela kuHulumeni.
Waphinda waveza nokuthi uxhaso uHulumeni alukhiphela imboni yamabhasi, izitimela kanye neGautrain lungabalelwa kwangama-48%. INkosi uRussel Cebekhulu ye-Inkatha Freedom Party (IFP), uMaliyakhe Shelembe weNational Freedom Party (NFP) kanye noManuel De Freitas weDemocratic Alliance (DA) bagcizelela okufanayo nozakwabo. Nakuba owayeNgungqongqoshe Wezokuthutha ngaleso sikhathi uJoe Maswanganyi ahluleka ukuzibophezela kokwakushiwo yileli komidi, kodwa wethembisa ukuthi uMnyango wakhe uzosibuyekeza lesi siphakamiso.
Yize amalungu aleli komidi akubeka njengento emqoka ukwelekelela imboni yamatekisi, kodwa akukho nalinye eselake lakhombisa ukuzibophezela ekufezekiseni lesi siphakamiso. Akukho nalinye iqembu kulawa ayekuleli komidi ake ahlaba iNkulumongqangi kaMengameli okanye isabelomali sezwe ngokungazibophezeli kulesi siphakamiso. Kuzokwazeka ukuthi zinsuku zonke imboni yamatekisi ithutha ama-65% wabasebenzi. Ngokwezibalo zeSouth African National Taxi Council (SANTACO) zangoMfumfu kowezi-2018, imboni yamatekisi iqashe abantu abevile ezinkulungwaneni izingama-600, iphinde ithuthe abantu abangaphezu kwezigidi ezili-15, okusho ukuthi imali elethwa yile mboni emnothweni waseNingizimu Afrika minyaka yonke yevile ezigidigidini ezingama-90. Lokhu kuyenza le mboni ibe ngezinye zezimboni eziwuhlomulisa kakhulu umnotho waseNingizimu Afrika.
Amaqembu amancane anjengo-African Transformation Movement (ATM) eholwa uVuyolwethu Zungula kanye ne- African Content Movement (ACM) eholwa ngowayengumqondisi jikelele kwaSABC uHlaudi Motsoeneng akhombisa ukuzama ukuheha abavoti kule mboni yamatekisi. Ekhuluma nabezindaba eMilpark eGoli ngoZibandlela wanyakenye uMotsoeneng wabala izinto eziyisithupha inhlangano yakhe ezibona njengezidinga ukuxazululwa ngokushesha, ukuxhaswa ngemali kwemboni yamatekisi kwaba ngenye yezinto azibala.
Kulolu daba wabeka wathi; “Owami uhulumeni awuzokwenza njengalona ka- ANC ojaha ukuxhasa oGautrain abahambela koSandton kodwa owami uzoxhasa amatekisi ukuze kuzokwehla nomthwalo kubantu abawasebenzisayo.” Ne-ATM nayo yagcizelela ekuxhasweni kwale mboni ngesikhathi yethula uhlu lwayo lwezethembiso ngoMasingana eBloemfontein.
Imisebenzi kaMantashe iqala ukugqama: uLuzipho
Lawa maqembu abonakala ekwazile ukufunda iqhinga elisetshenziswa amaqembu amakhulu ezepolitiki ngokuzibophezela kulesi siphakamiso. Kuzokhumbuleka ngowezi-2009 ukuthi i-ANC yayigxilise umkhankaso wayo ekulweni nesandulela ngculaza ngokuhlinzeka imishanguzo yokusidambisa lesi sifo kanye nokutshala imali eningi ocwaningweni lokunqanda ukubhebhetheka kwaso.
Lokhu kwayenza le nhlangano yathola amavoti angama-69.69% nakuba sekubekhona okukhulu ukuklwebhana phakathi kwabaholi bayo kwaze kwazaleka iCongress of the People (COPE) eholwa uMosiuoa Lekota kanye ne-African People’s Convention (APC) eholwa uThemba Godi. I-EFF yathola amavoti angaphezu kwesigidi ekubeni ingakaqedi ngisho unyaka yasungulwa ngenxa yokugxilisa umkhankaso wayo odabeni lokubuyiselwa komhlaba kwaboHlanga. Ukuhudula izinyawo odabeni lwesandulelangculalaza kukaHulumeni kaMbeki ngokwezibalo zeTreatment Action Campaign (TAC) kwadlula imiphefumulo eyevile ezinkulungwaneni ezingama-300, okuyilona nxeba eyangena ngalo i-ANC eyase iholwa ngowayenguMengameli uJacob Zuma ngokubuka ukuthi lolu udaba oluthinta izinkumbi zabantu. I-EFF igxila odabeni lomhlaba okufanele ubuyiswe nje yingoba bevile ezigidini ezingama-56 aboHlanga abaseNingizimu Afrika, okuyibeka emathubeni amahle len hlangano ekutholeni amavoti.
I-ATM ne-ACM nabo babonakala besika iphethini kulawa maqembu njengoba ukuxhaswa kwemboni yamatekisi kungachaza ukuthi imali yokugibela izokwehla okuyinto engathokozisa abantu abevile ezigidini ezili-15. Yize isiphakamiso salawa maqembu sithinta izinkumbi zabantu okungase kubakhuthaze wukuthi bayikhumbule uma sebevot. Umbuzo sekungaba wukuthi sebayazi yini ukuthi lezi zinhlangano zibathembisa ukwehla kwamanani kwazise amaqembu amancane eNingizimu Afrika awakutholi ukunakwa ngabezindaba nabahlaziyi njengamaqembu amakhulu.
Bayede News Feb 22, 2019